सुन तस्कर दारुकालाई छुटाउन १५ करोडको थैली बोक्दै संजय अग्रवाल ! - सुन तस्कर दारुकालाई छुटाउन १५ करोडको थैली बोक्दै संजय अग्रवाल !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १४ असार, 09:04:14 AM
काठमाडौं । सुर्य चुरोटको उत्पादक कम्पनी सुर्य नेपाल प्रा.लि.का विरगंज शाखाका उपमहाप्रबन्ध प्रभाकर विक्रम शाहसग सम्धेलो फुकाउदै गर्दा कुख्यात गोल्डेन डन राजु दारुका काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलबाट पक्राउ परेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले गोल्डन डन दारुकालाई असार १२ गते मंगलबारका दिन दरबारमार्गस्थित पाचतारे होटल अन्नपूर्णबाट पक्राउ गरेको हो । सो समयमा दारुकाको कान्छो छोरा अंकित दारुका र प्रभाकर विक्रम कि छोरीको विवाहको भव्य भोज भइरहेको थियो । साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम साक्य हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका विरगंजका सुन तस्कर दारुका एक्लै हालसम्म आठ क्विन्टल भन्दा बढि सुन तस्करी गरेको समितिसंगको बयानमा स्कीकार गरेका छन् । अहिल उनकोे बयान गृहमन्त्रालयमा जारी छ ।
उनले स्वीकार गरेको उक्त सुनको नेपाली बजार मुल्य साढे ३ अरब भन्दा बढि पर्न जान्छ । उनले तस्करी गरेको सुनको यो परिमाण विगत १० १२ देखिको हो । हराएको भनिएको साढे ३३ किलो सुनपनि यिनै दारुकाले बेचेको हुन सक्नेतर्फ अनुसन्धान समितिको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नामुद हुन्डी तस्करी विमल पोद्दारको बयानका आधारमा समितीले उनलाई पक्राउ गरी बयान लिन सुरु गरेको हो ।
दारुका पक्राउपछि विरगंजका अन्य सुन तस्कर र दलालहरुको भागदौड सुरु भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । यता दारुका पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनीहरुमा क्रास फैलिएकोले केही नेपाल नै छोडेर भारततर्फ भागेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार विरगंजमा यतिबेला उनलाई छुटाउन ठूला ठूला दलालहरु सक्रिय बनेका छन् । दलालहरुका नेता एवम सुन तस्कर दारुकाका व्यवसाकिय साझेदार संजय अग्रवाल राजनीतिक नेता र प्रहरी मिलाउन भन्दै दौडधुप गरीरहेका छन् ।
एक स्रोतका अनुसार १० देखि १५ करोडसम्म खर्च गरेर छुटाउन प्रहरीसँग कुरा मिलेको तर समितिका संयोजक ईश्वरराज पौडललाई मनाउन दलालहरुलाई हम्मेहम्मे परेको छ । एक जना पूर्व न्यायाधिश समेत दारुकालाई छुटाउने खेलोफड्कोमा लागेका छन् ।
को हुन त राजु दारुका ?
१२ बर्ष अगाडि विरगंजको आर्दशनगर स्थित लोहारपिमा उनी सामान्य घडिमर्मत पसल खोलेर बसेका थिए । सबैले उनलाई घडी मिस्त्री भनेर चिन्ने गर्थे,यतिमात्र होइन घडी बिग्रेपछि सबै उनीकहा घडी बनाउन आउथे,घडीवाला मिस्त्री भनेर दारुका त्यतिबेला चिनिएका थिए । त्यसको केही समयपछि भारतबाट विभिन्न ब्रान्डका घडी चोरी निकासी गरी बेच्ने दारुका त्यतिबेला घडी व्यापारीको नामले चर्चित थिए ।
चाइनासंगको व्यापार पछि उनी घडी व्यापार छोडेर सुन तस्करीमा लागेका हुन् । यतिबेला उनीसंग ३ सय करोड भारतीय रुपैया अथात् ५ अरब नेपाली रुपैया भन्दा बढि सम्पत्ती रहेको बताइएको छ । यत्रो अथाह सम्पत्ती दश बाह्र बर्षभित्रमै कसरी कहांबाट आयो भनेर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले जिब्रो टोक्छन् । उनले अहिले नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि घरजग्गा र अर्पाटमेन्ट जोडेका छन् । यत्रो अरबौ सम्पत्ती जोडेता पनि उनले राज्यलाई शुको पैसा कर तिरेका छैनन् । अब यो समितिले यिनीमाथि सम्पत्ती शुद्धिकरण र राजश्व छलीको पनि मुद्धा चलाउनु पर्ने विरगंजबासीहरु बताउछन् ।
काठमाडौंको रेडिसन होटल नजिकै उनले २ वटा सुविधायुक्त अर्पाटमेन्ट खरिद गरेका छन् भने, सितापाइलामा आलीशान बगंला पनि जोडका छन् । हालैमात्र उनले ५ करोड खर्च गरेर आफ्नो कान्छो छोराको विवाह सम्पन्नसंगै कान्छी बुहारीलाई मित्सुविसी कम्पनीको आउट ल्यान्डर गाडीे उपहार स्वरुप सुम्पेका छन् ।
यस्तै उनका २ करोड भन्दा बढि पर्ने फरक फरक ब्रान्डका ३ वठा गाडीहरु पनि छन् । सुन तस्करी लगायत घर जग्गा व्यवसायमा पनि हात हालेका तस्कर दारुकाले विरगंजस्थित अल टाइम पिसियोका संचालक सञ्जय अग्रवालको नाममा पनि अरबौ सम्पत्ती राखेको समाचार स्रोतको दावी छ ।
सर्लाहीमा कुनैबेला बिहान बेलुका खाना समेत धौ धौ हुने सञ्जय अग्रवाल यतिबेला विरगंजका डनका रुपमा चिनिन्छन् । प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेताहरुलाई तस्करी लाइन मिलाउन दलाली गर्ने अग्रवालले नेपालभर २० ठाउ भन्दामा जग्गा खरिद गरेका छन् ।
एउटा सामान्य पिसियो सञ्चालकले अथाह सम्पत्ती कहाबाट जोड्यो र यसको कर किन तिरेन भनेर राज्यले खोजी गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउछन् । अहिले अबैध धन्दाले कमाएको सम्पत्तीमा उनले राज गरिरहेका छन् ।
अग्रवाल यतिबेला करोडौमा खेलिरहेका छन् । उनीसंग ४० भन्दा बढि विभिन्न ब्रान्डका गाडीहरु रहेको बताइन्छ । विरगंजमा प्रहरी प्रशसनको दलालको रुपमा चिनिने सञ्जय अग्रवालले सुरा सुन्दरी भेटी चढाएर तस्करीलाइन खोलाउने गर्थे । यिनै अग्रवाल यतिबेला आफ्ना पार्टनर दारुकालाई छुटाउन करोडौको थली बोकेर हिडिरहेका छन् ।
स्मरणिय छ, केही बर्ष अघि सुन तस्कर राजु दारुकाका जेठो छोरा अमित दारुका डेढ किलो सुनसहित रङेहात पक्राउ परेका थिए । विरगंजको इनरुवा भन्सार नाकाबाट भारततर्फ उक्त सुन लैजादै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको भन्सार राजश्व गस्तीले पक्राउ गरी पथरैया राजश्व कार्यालयमा बुझाएको थियो । तत्कालिन समयमा २ करोड मुल्य बराबरको उक्त सुन काण्डमा मुद्धा हारेपछि सो सुन राज्यले जफत गरिसकेको छ ।
छानविन समितीले अव दारुका मार्फत थप रहस्यहरु खोतल्दै जान्छ कि, उनको करोडौको थैलीमा विकेर मुद्धा कमजोर गराउछ भन्ने आशंका पूर्ण नजरले विरगंजबासी हेरिरहेका छन् । थप रहस्य खोल्न सञ्जय अग्रवाललाई पक्राउ गनुपर्ने सुझाव विरगंजबासीको छ ।
२०७५, १४ असार, 09:04:14 AM